राजीनामा दिदै प्रचण्ड, यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित — Imandarmedia.com
राजीनामा दिदै प्रचण्ड, यस्तो कारण थाहा पाउने सबै चकित
काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग एमसीसीबारे पार्टीभित्र चुनावपछि छलफल हुने र सहमति नजुटे आफूले नैतिकताका आधारमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिने बताएका छन् ।
आइतबार पार्टीको प्रदेशस्तरीय १ स्तरीय भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा सहभागी हुन विराटनगर पुगेका प्रचण्डले एमसीसीबारेको व्याख्यात्मक घोषणा उचित सम्मानसहित कार्यान्वयन नभए फेरि आन्दोलन हुने बताएका हुन् ।
सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै एमसीसीबारे पार्टीभित्र विवाद भएको स्वीकार गर्दै यो विषयलाई हाल एक अपीलमार्फत एउटै भाषा बनाउने र चुनावपछि छलफल हुने दावी गरे।
एमसीसीबारे पार्टीभित्र चुनावपछि छलफल हुने र सहमति नजुटे आफूले नैतिकताका आधारमा अध्यक्षबाट राजीनामा दिने बताएका छन् ।आगामी चुनावपछि पार्टीमा एमसीसीबारे छलफल हुन्छ।
फेल भयो भने राजीनामा दिन्छु । ढुक्क हुनुहोला’, प्रचण्डले भने। त्यसैगरी एमसीसी पास भए पछि पार्टी छाडेका नेताहरुप्रति पनि प्रचण्डले टिप्पणी गरेका छन्।
एमसीसी पास गरेका कारण पार्टीमा बस्दैनौं भन्नेहरु एमालेमा प्रवेश गरेको समेत उनले बताए। उनले भने, ‘यो भन्दा विचित्र के हुन्छ जानु नि बरु किरणजी, विप्लवकहाँ । नभए नारायणमान विजुक्छे कहाँ जानू ।
‘संसदमा एमसीसीको सबभन्दा चर्को विरोध नारायणमान विजुक्छेजीको पार्टीको प्रेम सुवालले गर्नुभएको छ । त्यहाँ गएको भए त विरोध गरेको पनि अर्थ हुन्छ ।’ उनले भने।
तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न भूमिका खेलेका भन्दै कार्यकर्ता एमाले प्रबेश गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
आफ्नो पार्टीले व्याख्यात्मक घोषणासहित एमसीसी पास गरेको भन्दै उनले एमसीसीको विरोध गर्नेहरु एमाले प्रबेश गरेकोमा असन्तुष्टि जनाए ।एमसीसी पास गरेका कारण पार्टीमा बस्दैनौं भन्नेहरु एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै उनले भने,
यो भन्दा विचित्र के हुन्छ ? जानु नि बरु किरणजी, विप्लवकहाँ। नभए नारायणमान विजुक्छे कहाँ जानू । संसदमा एमसीसीको सबभन्दा चर्को विरोध नारायणमान विजुक्छेजीको पार्टीको प्रेम सुवालले गर्नुभएको छ।
त्यहाँ गएको भए त विरोध गरेको पनि अर्थ हुन्छ। उनले भने। हालै माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य ठम्मर विष्टले एमसीसीलाई कारण देखाउँदै पार्टीबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए।
उनले कार्यान्वयनका क्रममा व्याख्यात्मक घोषणालाई मिनिमाइज नगर्न चेतावनी दिएका छन् । त्यसो गरे सरकार छाडेर आन्दोलनमा जाने अवस्था आउनसक्ने उनले बताए।
बिराटनगर विमानस्थलमा आज सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले भने, ‘व्याख्यात्मक घोषणालाई कार्यान्वयनका क्रममा मिनिमाइज गरियो भने त्यही विषय भोलि आन्दोलनको विषय हुनसक्छ।
हामी चाहन्छौं त्यस्तो नहोस । व्याख्यात्मक घोषणालाई उचित सम्मानसहित कार्यान्वयनमा जाने विश्वास लिएका छौं । उनका अनुसार व्याख्यात्मक घोषणासहित पास भएको एमसीसीबारे पार्टीमा बहस कायमै छ।
आगामी चुनावपछि बस्ने बैठकमा यसबारे छलफल हुने र आवश्यक परे फोरम चलाउन पनि दिने गरी अघि बढेको अध्यक्ष प्रचण्डले बताए ।त्यो बेला फेल भयो भने के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने, राजीनामा दिन्छौं ढक्क हुनुस् ।
एमसीसी अनुमोदन गरेका कारण पार्टी छाडेका नेताहरुप्रति भने उनले कडा टिप्पणी गरेका छन् । तेस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्न भुमिका खेलेको भन्दै माओवादी केन्द्र आन्तरिक संकटमा छ।
पार्टीभित्रका नेताहरुले चर्को विरोध गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डसँग बार्गेनिङ गर्दैछन्। माओवादीले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनौट गर्नेबारे अहिलेसम्म कुनै तयारी नगरेको नेता देव गुरुङले बताए। उनले भने, पार्टीले अहिलेसम्म यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन ।
पार्टीको बैठकपछि कस्तो मापदण्ड तय गर्छ त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आउन झन्डै २ महिना मात्र बाँकी रहेका बेला अरु राजनीतिक दलहरूले सम्भावित उम्मेदवारको मापदण्ड तयार पारिसकेका छन्।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बनाएको मापदण्ड केन्द्रीय समितिबाट पारित हुन बाँकी छ।हालसम्म नेपाली काँग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी राप्रपाले महानगरपालिका बाहेक अन्य पालिका तथा वडाका लागि स्थानीय कमिटीलाई उम्मेदवार छनौट गर्ने अधिकार दिएको छ ।
साथै उम्मेदवार हुनका लागि केही मापदण्ड समेत तय गरिएको छ ।हाल जनप्रतिनिधिका रूपमा रहेकाहरू लोकप्रिय, फेरी जित्ने निश्चित भएकाहरूलाई फेरी दोहोर्याउने पनि नीति पनि दलहरूले अघि सारेका छन् ।नेपाली काँग्रेसले महानगरपालिकाका लागि केन्द्रीय समितिले उम्मेदवार तय गर्नेछ ।
उम्मेदवारका लागि मापदण्ड तयार पार्न छिटै केन्द्रीय समितिको बैठक बस्ने प्रवक्ता प्रकाश शरण महतले बताए ।उनले भने–‘उम्मेदवार हुन योग्य व्यक्ति इमानदार हुनुपर्छ। तल्लो तहको कमिटीमा जे सहमति हुन्छ त्यही हामी मान्छौँ । पार्टी विधानमा विभिन्न तहहरूलाई जे अधिकार बाँडफाँड गरेको छ, त्यहीँबाट समाधान गरिने छ।
तल्लो तहलाई नै उम्मेदवार सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ। विवाद आयो भने माथिल्लो निकायले समाधान गर्ने पद्धति तय भएको छ।’नेकपा एमालेले हाल जनप्रतिनिधि रहेका र राम्रो काम गरिरहेकाहरूलाई पुन सोही पदका उम्मेदवार उठाउने जनाएको छ। उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड तथा अन्य विषयमा निर्णय गर्ने आगामी चैतको पहिलो सातातिर बस्ने पार्टीको बैठकले निर्णय गर्ने एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले बताए।
उनले अघिल्लो चुनावमा एमालेले ४५ प्रतिशत स्थानीय तहमा चुनाव जितेको र ती स्थानीय तहमा राम्रो काम गरेका जनप्रतिनिधिहरू पुन दोहोरिन सक्ने बताए। एमालेले हाल प्रत्येक प्रदेशमा आगामी निर्वाचन उन्मुख अभिमुखीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम सम्पन्न गरेको बताए।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादी दलले पनि स्थानीय तहको चुनावका लागि तयारी थालेको छ। पार्टीको सिङ्गो शक्ति चुनावमा केन्द्रित हुन लागेको पार्टीका महासचिव डा. वेदुराम भुसालले बताए।
जनता समाजवादी पार्टीले महानगरपालिकाको उम्मेदवारको तय केन्द्रले गर्ने र अन्य पालिका तथा वडाका लागि स्थानीय कमिटीबाटै सहमति जुटाउने मापदण्ड तयार पारेको छ। शुक्रबार बसेको पार्टीको बैठकले तयार पारेको मापदण्ड पार्टीको संघीय परिषद् र केन्द्रीय कमिटीले पास गर्न बाँकी रहेको पार्टीका कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तिायाक राईले जानकारी दिए।
यता राप्रपाले पनि स्थानीय तहको उम्मेदवार छनौटको मापदण्ड तयार पारेको छ। उम्मेदवार छनौटको जिम्मा पार्टीको तल्ला तहको कमिटीलाई दिइएको छ। पार्टीको मापदण्डलाई चैत पहिलो हप्ता बस्ने पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले अन्तिम रूप दिने राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले जानकारी दिए।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा सम्भव भएसम्म सबै जिल्लामा उम्मेदवारी दिने तयारी गरेको छ। पार्टीको जिल्ला कमिटीलाई सम्भावित उम्मेदवारको विवरण पठाउन भने पनि जिल्लाबाट विवरण आइनसकेको पार्टीका नेता प्रेम सुवालले बताए।